मैले कोरोना संक्रमण भएपछि के गरेँ ? - Newslaya
मैले कोरोना संक्रमण भएपछि के गरेँ ?
हिमाल दाहाल १९ असोज २०७८, मङ्गलबार १०:३१ मा प्रकाशित
नेपालमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ । एक सातायताको निषेधाज्ञाको कारण संक्रमण र मृत्यु घटिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर समग्रमा यो पटकको कोरोना लहर अघिल्लो लहरभन्दा केही विध्वंशक चाहिँ पक्कै देखिएको छ । यसका केही कारणहरु छन् :
- आफैमा अघिल्लो पटकको भन्दा बढी संक्रामक भाइरस हो ।
- भारतमा ठूलो प्रकोपको रुप लिइसक्दा पनि सीमा क्षेत्रमा निर्बाध आवतजावत भइरह्यो ।
- ढिलो लकडाउन भएकोले वैशाखमा पर्ने मेला, महोत्सव, विवाहहरुले कोरोना संक्रमण फैलाउन मद्धत गर्यो ।
- अघिल्लो पटकको कोरोनाले खासै समस्या नगरेकोले जनताले नि कोरोनालाई टेरेनन् ।
- राजनीतिक दलको भेला, सम्मेलन, गुटका भेलाहरुले पनि जनतालाई अटेरी बन्न प्रोत्साहन गर्यो ।
- कोरोना परीक्षणको सुविधामा ढिलाई, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई वेवास्ता ।
- आइसोलेसन निर्माण गर्न र अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न ढिलाई भयो ।
- अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्न ढिलाई भयो ।
कोरोना संक्रमितहरुलाई यो पटक पनि अस्पताल बेडको अभाव देखियो । त्यससँगै यो पटक अक्सिजनको अभाव भयो । यस पटकको कोरोना संक्रमणले संक्रमितको शरीरमा अक्सिजनको लेभल घटाउँदा तत्काल अक्सिजन दिनुपर्ने आवश्यकता सृजना भयो । समयमा अक्सिजन र बेड नपाउँदा कतिपय संक्रमितहरुको ज्यान गयो । संक्रमणको लक्षण देखिँदा लापरवाही गरेकोले पनि कतिपयले ज्यान गुमाए ।
अहिले संक्रमण नियन्त्रणको क्रममा छ । मृत्यु र संक्रमणदर ओह्रालो लागिरहेको छ । संक्रमितहरु निको भएर घर फर्किरहेका छन् । अस्पतालहरुमा बेडको अभाव केही घटेको छ । त्यसैले अब आत्तिनु पर्ने स्थिती छैन । तर सावधान भने हुनुपर्छ ।
यतिखेर सिजनल फ्लुको प्रकोप पनि उस्तै छ । कोरोना र सिजनल फ्लुको लक्षण लगभग उस्तै हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । त्यसैले कोरोना संक्रमण भयो कि भनेर आत्तिनु हुन्न । संक्रमण नै भयो भने पनि केही समस्या हुन्न । अधिकांश बिरामीहरु घरमै बसेर निको भइरहेका छन् । अस्पताल गएकाहरु पनि केही दिनमै निको भएर घर फर्किरहेका छन् । मलाई पनि अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमण भएको थियो । सबैलाई उपयोगि हुने सोचेर त्यसबारे केही लेख्दैछु ।
पोहोर साल मलाई कोरोना लाग्दा के भयो ?
- दुई दिन टाउको दुःख्यो, औषधी खाएँ ।
- दुई तीन दिन हल्का भित्र भित्र ज्वरो आयो, सिटामोल खाएँ ।
- एक दिन पातलो दिसा गयो । खासै वास्ता गरिनँ ।
- एक दिन साबुन, सेनिटाइजरको वास्ना नआएको थाहा पाएपछि कोरोना हो कि भन्ने शंका लाग्यो र पिसिआर गराएँ ।
- केहीलाई भने स्वासप्रस्वासमा समस्या देखिने, अधिक ज्वरो आउने लगायतका लक्षण पनि देखिएका छन् । व्यक्तिपिच्छे फरक लक्षण देखिन्छन् ।)
कोरोना पुष्टि भएपछि के गरेँ ?
- अरुलाई नसरोस् भनेर आइसोलेसनमा बसेँ । त्यो बेलामा हलुका कमजोरी भयो । अरु लक्षण केही थिएन ।
- बिहान ब्यायम गरेँ । कपालभाँती गरेँ ।
- दिनमा ४–५ पटक बाफ लिएँ । भिटामिन सी, डी को चक्की किन्न पाइन्छ, खाएँ ।
- बेसारपानी, मनतातो पानी पिइरहेँ ।
- चिसो पानी र मौसमबाट टाढा रहेँ ।
- हावाको पर्याप्त आवत जावत भएको कोठामा बसेँ ।
- पोषिलो खानेकुरा खाएँ ।
चार पाँच दिनमा गन्ध आउने भयो । आइसोलेसनमा बसेको १० दिनपछि पिसिआर गराएँ । (१४ दिनपछि भाइरस आफै निष्क्रिय हुने हुँदा पिसिआर नगराउँदा पनि हुने विज्ञहरुले बताएका छन् ।)
समग्रमा आत्तिनु हुन्न । हामी धेरै समस्या र रोग, बिरामलाई जित्दै यहाँसम्म आइपुगेका हौं । कोरोनालाई पनि हामी परास्त गर्न सक्छौं । अलि जटिल समस्या देखियो भने डाक्टरसँग सल्लाह लिनुपर्छ । नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुले त्यसको प्रबन्ध मिलाएको छ । अस्पताल जानै पर्यो भने पनि पहिलेको जस्तो चिकित्सकहरु डराउँदैनन् । अस्पतालमा वेवास्ता हुन्छ भन्ने डर नमान्दा हुन्छ ।
आफन्त र छरछिमेकीहरु पनि डराउनु पर्दैन । संक्रमित हिडेको बाटो नै नहिड्ने गरी परपरै बस्नु पर्दैन । मास्क लगाएर नजिक गएर बोले हुन्छ । अरु बिरामीहरुजस्तै हेर्न, भेट्न जाँदा हुन्छ । हेर्दैमा र संक्रमितको घर पुग्दैमा सरिहाल्ने होइन ।